Governemanta sy banky iraisam-pirenena : « Hampodiana ilay volabe 193 tapitrisa dolara… » | NewsMada
Governemanta sy banky iraisam-pirenena : « Hampodiana ilay volabe 193 tapitrisa dolara… »
«Efa misy dingana ataon’ny fanjakana amin’ny fifampiresahana amin’ny Banky iraisam-pirenena ary vonona hifanome tanana hampodiana izany vola 193 tapitrisa dolara izany, hanam­piana ny vahoaka sy hanamboarana fotodrafitrasa, ahavitana zavatra maro », hoy ny mi­nisitra Andrian­tongarivo Lala­tiana, tetsy Ampefiloha, omaly. Notsia­hiviny fa mazava ny tatitry ny Banky iraisam pirenena ary tokony ho­jerena amin’ny fo tsy mi­an­gatra. Nanteriny fa natao tamin’ny taona 1990 hatramin’ny 2010 ny fanadiha­dian’ny mpamatsy vola. « Tsy tao anatin’ny fitondrana amin’izao fotoana izao sy ny fitondrana Tetezamita izany. Fantatsika ny nitondra ta­min’ izany. Samy voakasika avokoa ireo filoha teo aloha miisa roa niteny momba io vola io », hoy ihany izy.
No­hitsiny fa efa name­traka ny fanjakana tsara tantana ny fitondrana. Eo koa ny ady amin’ny kolikoly sy ny ho­soka.
Tsy matin’ny Coronavirus ny depioten’i Morombe
Etsy andaniny, nohitrikitrihin’ny mpitondra tenin’ny governemanta fa tsy matin’ ny Covid-19 ny depioten’i Morombe, Rakotomalala Lucien. « Nitondra ny soratr’aretina izy, saingy « negatif » rehefa natao ny fitiliana raha ny ta­titry ny talen’ny hopitaly mi­aramila (Homi)… Tsy voaisa amin’ireo marary sy matin’ ny Coronavirus izany izy ary tsy ao anatin’ny anatin’ny an­tontanisa nambaran’ny CCO. Tsy nisy ny maty tamin’iny fotoana iny », hoy izy.
Salama daholo ny mpitondra
Ankoatra izany, namaly ireo tsaho niely ny minisitra ka nanambara fa salama tsara avokoa ny filoha sy ny praiminisitra ary ny mpikambana eo anivon’ny governemanta. « Tsy marina ny filazana fa misy vehivavy minisitra tratran’ny Covid-19 », hoy ihany izy.